Sweet December! | မိုးသကျဦးလှငျ
Home » ရောက်တတ်ရာရာ » Sweet December!
အခြား Photography, ရောက်တတ်ရာရာ
ရေးသားသူ : မိုးသက် // 9:19 PM
Posted by မိုးသက် at 9:19 PM Read more
Ma Tint December 16, 2014 at 11:24 PM
ဘလော့ဂါတိုင်း စာရေးဖြစ်သည်ဖြစ်စေ မရေးဖြစ်သည်ဖြစ်စေ ကိုယ့်ဘလော့လေးကို လွမ်းနေကြမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပြီးသားပါ။ ဓာတ်ပုံတွေလှတယ် အချိန်ရရင် ဘ၀ဖြစ်စဉ်လေးတွေ ဆက်ရေးပါအုံးလား မိုးသက်ရေ။
မိုးသက် December 17, 2014 at 12:58 AM
ဟုတ်ကဲ့တီတင့်.. ရေးမှာပါ.. :)
မိုးငွေ့........ December 17, 2014 at 11:53 PM
blackroze December 20, 2014 at 8:08 AM
မိုးသက် ..နင်ဘယ်ကိုပြောင်းရတာလည်း...သင်ကြားရေး ပိုင်းလား..